Guddoomiyaha Napoli oo Wakiillada Ciyaartoyda ku tilmaamay ‘Kansarka Kubadda Cagta’ – Gool FM
Guddoomiyaha Napoli oo Wakiillada Ciyaartoyda ku tilmaamay ‘Kansarka Kubadda Cagta’
(Napoli), 06 Okt 2016 –Guddoomiyaha kooxda Kubadda Cagta Napoli ee Waddanka Talyaaniga Aurelio De Laurentiis ayaa si kulul u cambaareeyay Wakiillada ciyaartoyda isagoo ku tilmaamay ‘Kansarka Kubadda Cagta’ sheegayna in ciyaartoydu aysan u baahneyn wakiillo ka dalllaala.
Wareysi uu siiyay Wargeyska ‘Telegraph’ ee Ingiriiska ayuu De Laurentiis ku sheegay in Wakiillada ciyaartoydu ay iska bixiyaan canshuuraha ku waajibay waxaana uu yiri “Hollywood-ka Mareykanka, Atoorayaasha iyagaa mushaarka siiya Wakiillada, anigu lacag ma siin karo Wakiil Atooraha, sababtee arrintaasi uga sameyn karaa kubadda Cagta”.
De Laurentiis oo sidoo kale Soo Saare weyn oo dhinaca Filimada ah ayaa horey ugu guul darreystay wada hadallo badan oo kooxdiisa Napoli ay ku soo iibsan lahayd ciyaartooy cusub kaddib markii ay is fahmi waayeen wakiillada laacibiinta iyo qaabkii loo bixin lahaa xuquuqda lacagaha ka soo xarooda sawirrada ciyaartoyga.
“Ma garanaysaa, waa Kansar ku dhex jira jirka Ciyaarta, dhammaantood ma ahan, laakiin waxaan garan la’ahay sababta laacibku ugu baahan yahay ruux wakiil ka noqda” ayuu si caro leh u yiri 67 jirkan Talyaaniga ah.
"Diyaar ayaan u ahay inaan heshiis cusub u saxiixo Arsenal" - Santi Cazorla